कमाएको पैसा जोगाउन मुस्कील छ ? उसोभए अब यी चार उपाय अपनाउनुहोस् - Arghakhanchi Saptahik
कमाएको पैसा जोगाउन मुस्कील छ ? उसोभए अब यी चार उपाय अपनाउनुहोस्
। पैसा मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण वस्तु हो । पैसा विना हामी एक कदम पनि अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छौं । पाइलै पिच्छे पैसाको जरुरी छ ।
तपाईं हामीले कमाएको पैसा जोगाउन सकिरहेका हुदैनौं । कसरी पैसा जोगाउन सकिन्छ भनेर तपाईै चिन्तित हुनुहुन्छ होला सायद । हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार पैसा जोगाउनका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । ती उपायबारेमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
वास्तु शास्त्रका अनुसार अनुसार
तपाई आफ्नो पर्समा माता लक्ष्मीको एउटा तस्वीर राख्नुहोस्, यस्तो पनि मानिन्छ कि माता लक्ष्मीको तस्वीर राख्नाले लक्ष्मी प्रसन्न भएका बेला तपाईको पर्समा पनि आउन सक्छ । तपाईको पर्स कहिल्यै खालि हुदैन । यदि यसो गर्दा पनि अधिक मात्रामा खर्च भइरहेको छ भने केही चुट्की चामल राख्नुहोस यसो गर्दा तपाईको अनावस्यक खर्च हुन पाउदैन ।
अनुसार एउटा अर्को उपाय पनि बताइएको छ की, शायद यस्तो उपाय तपाई हरुलाई अलि अचम्मको लाग्न सक्छ । तर यस उपायले पनि फाइदा लिन भने अवस्य पनि सकिन्छ
। यसको लागि गाइको गोवर आफ्नो पर्समा राख्नुपर्नेहुन्छ । यसबाट महालक्ष्मी
को बास गर्ने संभावना रहन्छ । जसकारण बेफजुल खर्च हुनवाट रोकिने संभावना रहन्छ ।
बास्तुशास्त्रमा अर्को उपाय पनि बताइएको छ कि तपाईको मनोकामना एउटा रातो कागजमा लेखेर रातो रंगको खाममा राखेर पर्समा राख्नुहोस,
यसले तपाईको मनोकामना पूरा हुने संभावना रहन्छ ।
तपाईंले एक पटक यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्, अनि तपाईंको केही रकम जम्मा हुन सक्छ ।
- See more at: http://www.nepalsandesh.com/2016/05/18/195628.html#sthash.DR3SsCb3.dpuf